Western Slope, CO • Body Rub ary NuRu Massage
Ny karazam-panorana rehetra any Western Slope, CO: Nuru Massage, Body Rub, Full Body Massage.
Ny Havoana Andrefana dia manondro faritra iray amin'ny fanjakan'ny Colorado mampiditra ny zava-drehetra ao amin'ny fanjakana andrefan'ny Continental Divide. Ny rano any andrefan'ny Divide dia mikoriana mankamin'ny Oseana Pasifika. Ny rano izay milatsaka sy mikoriana atsinanan'ny Divide dia miantsinanana. Ny karazana isan-karazany fanorana ao Western Slope, CO: Nuru fanorana , Voninkazo, Fanorana vatana manontolo.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana Septambra-Novambra, Mey-Aogositra.